I-ODM kunye neNkonzo ye-OEM | JGo
Isisombululo esinye sokumisa izixhobo ezinxibekayo ezihlakaniphileyo
Earphones kunye Headphones
Iiwotshi zeSmart zamva nje
Ekhaya > Inkonzo
Sine-R&Iqela leenjineli ezingaphezu kwama-30 kunye nabaqulunqi abaye babandakanyeka kwiwotshi kunye nokutya kwe-electronic field iminyaka emi-5 ukuya kweli-10.
JGo's injongo yantlandlolo kukudala iimveliso ezikrelekrele ezikhathalela kwaye zikhusela umntu. Sifuna ukwenza i-smart watch / tracker yokuqina eya kuba nenkathalo kwaye ikhathalele kwaye igxile kubasebenzisi' amava. I-JGo iyabakhathalela abasebenzisi' impilo kakhulu, kwaye iwotshi yethu ehlakaniphile / umkhondo womsebenzi ujonga imeko yakho yezempilo ngokusondeleyo, hlalutya idatha yakho yezempilo kwaye ulumkise iingxaki ezinokuthi zibekho. I-JGo iyakwenza iinzame ezithe gqolo ukukubonelela ngeewotshi zezempilo ezikrelekrele.
Singanikezela ngelogo yebhrendi, ibhokisi yesipho, incwadi yomsebenzisi kunye neenkonzo zesiko le-APP. Iinkonzo ezahlukeneyo zesiko ezineemfuno ezahlukeneyo ze-MOQ.
I-LOGO yakho inokukrolwa ngelaser kwiwotshi ngeodolo encinci.
1000pcs. Kwintsebenziswano yokuqala, iodolo yakho encinci (i-100pcs nangaphezulu) yamkelekile, kodwa ixabiso liya kuba phezulu kancinci ngokusekelwe kubuninzi bakho.
Ewe, unokudibanisa imibala yemodeli nganye kunye nezitayile ezahlukeneyo.
Kwiimveliso ezisesitokhweni, sinokuyithumela kwiintsuku ze-3 emva kokufumana intlawulo yakho. Umyalelo wesiko, ubuninzi phakathi kwe-2000pcs, ixesha lokuvelisa yi-15-25 iintsuku emva kokuba zonke iinkcukacha ziqinisekisiwe.
Kutheni ukhetha JGO?
I-JGo izakwenza iinzame ezithe gqolo ukukubonelela ngeewotshi zezempilo ezikrelekrele.
Ukuba uneminye imibuzo, sibhalele